कोरोना संक्रमणले देखाएको वाटो !
बिहिबार, असोज ७, २०७८ ०१:२४:५९ युनिकोड
सुदीप घिमिरे ।
कोरोना भाईरसको संक्रमण नेपाल भित्रिएको सात महिना भयो । संक्रमणसंगै एक गैह्रसरकारी संस्थासंग आवद्ध भयाँ । गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा रहेका क्वारेन्टीन र आइसोलेसनमा मनोसामाजिक सहयोग खटियाँ । सोही क्रममा मलाई केही फरक अनुभव भयो । सोही अनुभवहरुलाई आधारमानी कोरोना भाईरसवाट प्रभावितको शारीरिक, मनोबैज्ञानिक र समाजिक समस्याहरुलाई यस आलेखमा समावेश गरेको छु। त्यस वाहेक स्थानीय निकायले संक्रमण व्यवस्थापनमा खेलेका भुमिकाहरु र आगामी दिनमा आउन सक्ने चुनौतीहरुलाई समेत लेखाजोखा गरेको छु ।
गत बर्ष चत्रै महिना देखि नेपालमा बन्दाबन्दीको अवस्था सुरु भयो । सुरुको तीन महिना घरमै बस्ने काम भयो । कसैलाई सहयोग गर्ने अवस्था बनेन । तर कोरोना भाईरसले नेपालीहरुको आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मनोबैज्ञानिक पक्षमा विस्तारै प्रभाव पार्न थाल्यो । आत्महत्याको बढ्दो दर यसको ज्वलन्त उदाहरण थियोँ । कोरोना भाईरसले जनमानसमा अन्योलता, डर, र तनावको भावना थप्यो । संक्रमण कसरी सर्छ, त्यसको उपचार के हो भन्ने प्रष्ट जानकारी नहुदाँ अन्योल र अनिश्चितता बढ्योँ । स्वदेश भित्र पुर्णरुपमा व्यापार, व्यावसाय, बिद्यालय, यातायत सवै बन्द भए ।
विस्तारै विदेश भुमिका रहेका नेपाली घर फर्केँ । स्थानीय निकायले उनीहरुको सुरक्षामा राम्रै ध्यान दियौँ । नगरपालिकाले वनाएका क्यारेन्टाइनहरुमा उनीहरु बस्न थालँे । संक्रमण नभएको पक्का भए पछि उनीहरु आफ्नो आफ्नो घर गएँ । विदेशवाट आएका नेपालीहरु प्राय कम उमेरका र निरोगी थिएँ । उनीहरुमा कारोना भाईरसको संक्रमण भए पनि प्राय व्यक्तिहरुमा लक्षणहरु थिएनन् । त्यसैले कोरोनावाट मृत्यू हुनेहरुको सख्या न्यून थियो ।
राम्रो व्यवस्थापन गरेकोमा सरकार र स्थानीय निकाय मख्ख थिएँ । विदेशवाट आउने जाने क्रम असार महिनाको अन्त्य सम्म रहिरह्यो । असारको अन्त्य सम्म आइपुग्दा स्थानीय निकायले तयार पारेका क्वारेन्टाइनहरु खाली भए । मान्छेहरुले भन्न थाले नेपालले कोरोनाको व्यवस्थापन सही तवरवाट गर्यो । समय वित्दै गयो । मानिसहरु घर भित्र बस्दा बस्दै आत्तिए । देशको अर्थतन्त्र प्राय वन्दै भयो । सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान वनाउन जिल्ला भित्र मात्रै यातायातहरु संचालन गर्न अनुमति दियो । व्यापार, व्यवसायहरु संचालन गर्न सरकारले अनुमति दियो । सरकारले दिने सेवाहरु पुन सुचारु भए ।
सोही कारण कोरोना भाइरसले अग्र पक्तिमा रहेर सेवा दिने व्यक्तिहरु जस्तै प्रहरी, सेना, स्वास्थ्यकर्मी, अन्य सरकारी कर्मचारीहरु संक्रमणको सिकार वन्न थालेँ ।उनीहरु सुरुको समयमा विदेशवाट आउने नेपाली दाजु भाईहरुलाई व्यवस्थापन गर्न खटिएका थिएँ । हवाई मार्ग, सिमा क्षेत्रवाट आउने नेपालीहरुको व्यवस्थापनमा रहेका अग्रपक्तिका कर्मचारीहरु संक्रमणको सिकार बनेँ । सेवा दिने क्रममा उनीहरुको बढीनै घुलमिल रहन्थ्यो । समुदायसँग घुलमिल हुने गर्दथे ।
सायद समुदायमा संक्रमण फैलिनुको मुख्य कारणनै अंग्रपक्तिमा रहेका व्यक्तिहरुको सुरक्षा प्रभावकारी ढंगवाट हुन सकेन । प्राय समुहमा बस्ने भएकाले संक्रमणको दर बढिनै देखियो । अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा अग्रपक्तिमा रहेका व्यक्तिहरु संक्रमण भइरहेका छन् । त्यस वाहेक भारतिय भुमिवाट आउनेहरु नेपाली दाजुभाईहरु र समुदायमा रहेका व्यक्तिहरुलाई समेत संक्रमण फैलिरहेको छ । हरेक दिन ३ हजार देखि ५ हजार सम्म संक्रमणको दर बढीरहेको छ । सुरुको चरणमा विदेशवाट आएहरु बढी संक्रमित थिए । दोश्रो चरणमा कर्मचारीहरुमा संक्रमण बढेकाले मृत्यूको दर न्यूनै थियो । तर संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिएकाले संक्रमण हुनेहरु प्राय सवै उमेर समुहका व्यक्तिहरु रहेका छन् ।
दीर्घरोगीहरु बढी छन् । बालबालिका, गर्भबति महिलारुहरु पनि छन् । त्यसैले कोरोना भाईरसका कारण मृत्यू हुनेको संख्या बढिनैरहेको छ । अहिले व्यक्तिहरु आइसोलेसन, क्यारन्टीन, घरकै एकान्तवास, घरकै एकान्त क्यारेन्टीनमा छन् । सुरुको चरण जसरी आइसोलेसन र क्यारेन्टीनको अनुगमन, सहयोग स्थानीय निकायले जति प्रभावकारी ढैगले गरेका थिएँ अहिले त्यसको प्रभावकारीतामा ह्रास आउन थालेको छ । कोही व्यक्तिको नतिजा पोजेटिभ आयो भने उसको सम्पर्कमा रहका व्यक्तिहरुको अुगमन राम्रोसंग हुन सकेको छैन् । फलस्वरुप कोरोना संक्रमणको संख्या दिन रात दुई गुणा, चार गुणा बढ्दै जान थालेको छ । सुरक्षाका मापदण्ड राम्रोसंग लागु भएको छैन् । सार्वजनिक बसहरु संचालन भईरहेका छन् ।
देशको एक कुनाको मान्छे एकै दिन कयौ कुनासम्म पुगेका छन् । विस्तारै हिन्दुहरुको महान पर्व दशै पनि आउँदैछ । यो समयमा व्यक्तिहरुको चहल पहल अन्य भन्दा बढीनै हुन्छ । यदी दशै र दशै पछि संक्रमणको दरले कुनरुप लिने हो भन्न सकिने अवस्था छैन् । हाल सम्म संक्रमण भएका व्यक्तिहरुको शारीरिक लक्षणहरुलाई हेर्दा सामान्य, कम कडा र गम्भीर समस्याको रुपमा बर्गिकरण गर्न सकिन्छ । सामान्य अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरु कोरोनाको संक्रमण भए पनि उनीहरुमा कुनै समस्याको लक्षणहरु देखिएको पाइदैन् । उनीहरु सामान्य व्यक्तिसरह आइसोलेसनमा बसिरहेका हुन्छन् ।
केही व्यक्तिहरुमा भने शारीरिक समस्याका केही लक्षणहरु देखिने गर्दछ । संक्रमण भएको एक दुई दिन हल्का ज्वरो आउने, सामान्य रुघा लागेको जस्तो अनुभूति हुने । कसैलाई एक दुई दिन टाउको दुखे जस्तो हुने । शरीर भारी भए जस्तो हुने । खाने कुरामा कुनै स्वाद नआउने जस्ता लक्षणहरु देखिएको पाइएको छ । यदी यस्ता लक्षणहरु देखिएको व्यक्तिमा अन्य कुनै शारीरिक समस्या छैन भने घरेलु उपचार विधि (तातो पानी) एक दुई दिन पछि समस्याहरु आफै कम भएको गएको पाइन्छ । जसलाई कम कडा खालको समस्यामा राख्न सकिन्छ ।
तर कम कडा खालका समस्या भएका व्यक्तिलाई देखिने समस्या सामान्य भन्दा बढी देखियो भने उनीको समस्यालाई गम्भीर समस्याकोरुपमा लिन सकिन्छ । उनीहरुलाई बोल्न गाह्रो हुने । श्वास फेर्न पनि कठिन हुने । श्वास प्रश्वास पछि छिटो छिटो आउने गर्दछ । वारम्वार खोकी पनि लाग्ने गर्दछ ।ज्वरो पनि आईरहने । यस्तो समयमा तुरुन्तै श्वासकर्मीको सहयोग र सल्लाह लिनु पर्ने हुनसक्छ । आइसोलेसनमा बस्दा प्राय उपचार गर्ने विधि भनेको तातो पानी, नुन पानी, कागती पानी, टाउको दुख्यो भने सिटामलनै मुख्य हुन् । वनाइएका आइसोलेसनहरु कोही व्यवस्थित छन् । केही आइसोलेसनमा सामान्य औषधी छर्ने मेसिन पनि छैन् । तर पनि स्थानीय निकाय, स्वास्थ्यकमी, प्रहरीहरु कोरोनाको व्यवस्थापनमा लागि परेको छन् ।
शारीरिक समस्या वाहेक मनोबैज्ञानिक समस्यालाई लेखाजोखा गर्दा कोरोना संक्रमित अधिकांश व्यक्तिहरुमा डरको भावना बढी छ । डर आउनु श्वाभाविकै हो । रोगको उपचार छैन् । केही असर गर्छकी भन्ने चिन्ता संक्रमित र आफन्तहरुलाई बढी छ । त्यस वाहेक दिक्क लाग्ने, राती निदाउन नसक्ने, मन आत्तिने, समय कटाउन नसक्दा छटपटि हुने आदि लक्षणहरु प्राय व्यक्तिहरुले अनुभव गरेका छन् । आइसोलेसनमा शिक्षित, अनुभवि व्यक्तिहरु छन् भने उनीहरुले आफुलाई व्यवस्थापन गर्न योग अभ्यासहरु, नाँचगाँन, रमाइलो कार्यक्रमहरु संचालन गरेका छन् ।
तर पनि कतिपय व्यक्तिले एक्लोपनको अनुभूति गर्ने गरेका छन् । कोठा कोठामा बसेका छन् । एकले अर्कोलाई देख्दा डरको भावना जाग्रित भएको छ । कतिपय स्थानीय निकायले मनोसामाजिक परामर्शकर्ताहरुको सहयोग लिएका छन् । जसले गर्दा संक्रमित व्यक्तिहरुको आत्मबल बढाउन, तनाव व्यवस्थापन गर्न उत्तम कार्यक्रमहरु संचालन पनि भएका छन् । नगरका मेयर, उपमेयर आफ्नै उपस्थितिमा तनाव व्यवस्थापन र मनोशिक्षाका कार्यक्रमहर सचालन भइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय निकायले संक्रमितहरु मनोबैज्ञानिक पक्षहरुलाई भने ध्यानदिन सकिरहेका छैनन् । जसका कारण व्यक्तिहरुका आत्मबल घटिरहेको छ ।
संक्रमित भएका व्यक्तिहरु घर फर्के पछि सामाजिक लाञ्छनाका शिकार भएका छन् । कोरोना गाउँका ल्यायो । उसको घरमा नजाउँ, उसको वाटो नहिड् भन्ने जस्ता व्यवहार समुदायमा भईरहेका छन् । संक्रमित हुनु के व्यक्तिको दोष हो र ?निको भएर पर्केको आत्मबल घटाउने र व्यक्तिको इज्वत प्रष्तिठामा आच आउने क्रियाकलापहरु समुदायमा भईरहेका छन् । यसले गर्दा समाजमा भएको सामाजिक भाईचारको भावना विस्तारै घटिरहेको छ ।
शारीरिक, मनोबैज्ञानिक र सामाजिक समस्यासंग संक्रमणको दर पनि बढिरहेको छ । लक्षण सहित संक्रमण हुने व्यक्तिहरुको संख्या बढिरहेको छ । धेरैलाई अस्पतालको सहयोग चाहिन सक्छ । यस्तो समस्यामा स्थानीय निकायले त्यसको माग पुरा गर्न सक्लान् प्रश्न चिन्ह्र खडा भएको छ । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले संक्रमणको व्यवस्था कसरी गर्लान ?सरकार आफै एक्लै अगाडी बढेर यसको निराकरण होला ? पक्कै पनि सम्भव छैन् ।
त्यसैले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले नीजि क्षेत्रको सहयोग लिन जरुरी छ । नीजि क्षेत्रलाई सूचना प्रवाह, सचेतना फैलाउने, संक्रमणको पहिचान, उसंगै उठ बस गरेका व्यक्तिहरुको पहिचान, उपचारको व्यवस्था गर्ने कार्यका सरकार लाग्नु पर्ने देखिन्छ । लक डाउन गरेर देश र जनताले जति दुख पाए त्यो भन्दा बढी संक्रमितर मृत्यको दर बढ्यो भने अझै बढी पाउने छन् । त्यसैले यो बेला सरकार मात्र नभई हरेक जनताको साथ र सहयोग जरुरी छ ।
संक्रमण रोक्ने उपाय भनकै भौतिक दुरी कायम राख्नु, सुरक्षा न्युनतम मापदण्ड लागु गर्ने, पानी प्रशस्त्र खाने, सुत्ने कुरामा ध्यान दिने, खाना मिलाएर खाने र तनावलाई व्यवस्थान गर्ने कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्छ । यो नयाँ अवस्था हो । नयाँ अवस्थासंग जसले समायोजन हुन जान्दैन यसलाई नयाँ परिस्थितिसंग जुध्न कठिन हुन्छ । त्यसै पहिलेको जस्तै तरिकाले व्यपार गर्छु, बिद्यालय चलाउछु, नोकरी गर्छु भनेर हुदैन् । परिस्थिति फेरीएको छ । नयाँ परिस्थिति अनुसार व्यपार, व्यवासाय र नोकरी गर्न सिक्नु पर्छ । आफुलाई सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर अगाडी बढ्नु पर्ने छ ।
त्यसैले कोरोनासंग डराउने होइन् । जुध्ने हो तर तरिका फकर हुनु पर्छ । सुरक्षाको मापदण्ड प्रयोग गर्दा गदै संक्रमण भयो भने पनि आफुले आफैलाई ख्याल गर्न सक्छु, माया गर्न सक्छु, कोरोनासंग जुध्न सक्छु भन्ने सोचको विकास गर्नु पर्छ । कोरोना लागे पनि ठिकै छ आफुले आफैलाई माया गर्छु कोरोनासंग जुध्न सक्छु भन्ने भावनाको विकास गर्न सके । संक्रमण भईहाल्यो भने पनि मन आत्तिदैन् । शारीरिक र मनोबैज्ञानिक रुपमा शक्ति वचाई राख्न सहयोग गर्छ ।